Ngathi - Gumzo
I-Usiku Games yase Kenya yasungulwa ukuze iqazulule izinkinga zabasha ababegembula e-Africa, kodwa uma Igciwane le-Corona libetha, sabona ukuthi indawo yethu yasendlini yomdlalo we-video ebonwa ndawo zonke ingasiza ukuhlanganisa imindeni, yenze iminotho iqhubeke namabhizinisi ase-Africa nabantu bakhulumisane ngendlela ethenjwayo, ephephile ngamanani aphansi. Uma seziphelile izinyanga ezimbili, uGumzo wazalwa, waba ngoyedwa owakhiwe e-Africa ovumela ukuhlanga kwabanti emishineni, yenzelwa i-Africa.
Konke ukushaya kukaGumzo ku-encypted, okwenza ukukhuluma kwakho kube ngokungasese kuphinde kuphephe. Uma bengedluli kwabawu 4 abashayile, lokho kusho ukuthi kusuka kumunye kuya komunye ku-encrypted. Lapho bebaningi kunalokhu abashayile, lokukhuluma ku-encrypted kwababili abashayelanayo kanye nomshina obahlanganisile. Singakwazi ukuba nomhlangano ngasese lapho unemishina yakho yokugcina i-data okwenza kuphephe kakhulu ukushaya
Yakhiwe e-Kenya, isekela i-Kenya
U-Gumzo wasungulwa e-Kenya ngokuziqhenya, yinkapani yeze ICT e-Kenya: I-Usiku Games. Konke ukushaya okwenza kuGumzo kuveza amathuba omsebenzi e-Kenya kuphinde kusekele ukukhula komnotho khona. Yonke inkokhelo ihlala e-Kenya, kanti kulesikhathi se-Covid-19, sinikela u-50% wazo zonke izimali ezakhiwe kwaGumzo ukuqhasa imisebenzi yokulwa ne-Corona kulo lonke izwe